यी बलिउड अभिनेता थिए अनन्या पाण्डेका पहिलो क्रस « Khabarhub
यी बलिउड अभिनेता थिए अनन्या पाण्डेका पहिलो क्रस
मुम्बई – चंकी पाण्डेकी छोरी अनन्या पाण्डेले ‘स्टुडेन्ट अफ द इयर २’ मार्फत बलिउडमा डेब्यु गरिन् । उनी पछिल्लो समय दोस्रो फिल्मको छायांकनमा व्यस्त छिन् । यसका अलावा उनी एक अन्तराष्ट्रिय ब्राण्डको प्रचार पनि गरिरहेकी छिन् ।
हालै अनन्याले एक कार्यक्रममा आफ्नो पहिलो क्रसका बारेमा बताइन् । कार्यक्रममा अनन्यालाई सोधियो कि, तपाईंको पहिलो क्रस को थियो ?
यसको जवाफ दिँदै अनन्याले भनिन् – ऋतिक रोशन ।
अनन्याका अनुसार, जब उनी २ वर्षकी थिइन् । त्यतिबेला उनले ऋतिकलाई एक बर्थ डे पार्टीमा देखेकी थिइन् । त्यतिबेला नै ऋतिकप्रति उनी आकर्षणमा परेकी थिइन् ।
अनन्याले आइडियल व्यक्तिका रुपमा भने वरुण धवनलाई लिएको बताइन् । वरुणको क्युटनेस आफूलाई मन पर्ने पनि उनले खुलासा गरिन् ।
अनन्यालाई के प्रेममा परेर दिल टुटेको थियो ? भनेर पनि सोधिएको थियो । यसमा उनले आफ्नो दिल नटुटेको तर अरुको दिल तोडेको बताइन् । उनले आफ्ना कैयन् फ्यान भएको र कतिले त बाइकमा पिछा गर्ने समेत गरेको बताइन् ।
उनले एक फ्यान स्मरण गर्दै भनिन्, ‘एक युवक मेरो घरमुनि झण्डै एकसय वटा चकलेट बोकेर पुगेका थिए, मलाई चकलेट एकदमै मन पर्छ ।’
प्रकाशित मिति : १६ असार २०७६, सोमबार ११ : ३५ बजे